Isiokwu nke Taylor Chrisman na Martech Zone |
Edemede site na Taylor Chrisman
Taylor Chrisman bụ akụkụ nke Ọdịnaya Marketing otu na Ahịa Digital Digital. O nwere obi uto banyere ịkọ akụkọ akụkọ site na mmekọrịta na itinye ọdịnaya na nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta.
Taylor bụ agadi na Mahadum San Diego na-amụ ahịa.
Etu esi emepụta Snapchat Ad
Monday, September 26, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Taylor Chrisman
N'ime afọ ole na ole gara aga, Snapchat amụbaala ihe na-eso ya ihe karịrị otu narị nde mmadụ n'ụwa niile na ihe karịrị ijeri vidio iri vidio na-ele kwa ụbọchị. Site na ọnụọgụ ndị na-eso ụzọ na ngwa a kwa ụbọchị, ọ bụ ihe ijuanya na ụlọ ọrụ na ndị mgbasa ozi na-enuga na Snapchat iji kpọsaa ahịa ha. Millennials ugbu a na-anọchite anya 100% nke ndị ọrụ niile na Snapchat Ndị ahịa na-etinye 10% karịa na puku afọ karịa ndị ọzọ niile, ndị